Dharka ugu sareeya ee geedka canjiga ah ee Shiinaha | February 2020
Sidee loo codsadaa HB-101, saameynta daawada dhirta
Ugu Weyn Ee Dharka ugu sareeya ee geedka canjiga ah ee Shiinaha
Sida loo daryeelo lemongrass Shiinaha
Leenongrass Chinese - Liana dhererkeedu yahay ilaa 15 m, taasina waa mid ka mid ah 14 nooc oo schisandra ah, oo si dabiici ah u kora Bariga Faro ee Russia. Ma taqaanaa? Xitaa dhakhaatiirta qadiimiga ah ee Tibetan iyo Tibetan waxay ogaadeen dhammaan wixii ku saabsan bogsiinta bogsiinta geedka canjiga Shiinaha oo loo isticmaalo ginseng. Dhammaan qeybo ka mid ah dhirta waxaa ku jira walxaha bayolojiga firfircoon, waxay leeyihiin tayli, tayadoodu kicineyso, waxaana loo isticmaalaa in lagu diyaariyo cabitaano daawo, decoctions, tinctures oo leh nacnac liin ah.
In lagu koriyo oo ka mid ah beeraha ee dalka ka soo baxa baradho yaryar
Agrotechnical beerashada kale ee kaabajka: beeridda geedo iyo daryeelka ee bannaanka u furan
Shan tayo oo aad u fiican oo aad u karisid dhadhan fiican leh mashiinka fudfudud ee Brussels
Kala duwanaanta tufaaxa ah ee tufaaxa Renet Simirenko ayaa isku dayi doonta inay sameyso nooc caalami ah
Sidee loo keenaa haraaga guinea ee hoyga guriga
In ururinta ee bannaanka u inta badan dhirta aan caadi ahayn. Waxay ku qurxinayaan, ufanyihiin oo ay ku faani karaan. Wakiilada noocaas ah ee jimicsiga waxaa ka mid ah Jatropha. Sharaxaad Jatropha waa warshad dil ah. Waxay u dhigantaa Euphorbia qoyska. Cirro Jatropha waxaa ka mid ah in ka badan 150 nooc, kuwaas oo ay matalaan caws, geedo yaryar, geedo yaryar. Read More
Dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan idaha Kuibyshev ayaa ah
"Ivermectin": tilmaamaha loo isticmaalo xayawaanka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dharka ugu sareeya ee geedka canjiga ah ee Shiinaha 2020